Kuleminyaka 10 iminyaka, izigidi sesizicabangile yeka indlela okuzuzisa ngayo ukuthatha isitimela! Amasimu Rich zasemazweni, ogwini elikhazimulayo futhi acwebile zamakhorali entabeni ukuthi akakaze okukhulunywa ekuvakasheni izincwajana noma blogs. Ukuthatha isitimela kuyinto fun, elula futhi ngendlela isikhwama-friendly…
Backpacking ingenye yezindlela ejabulisa kakhulu ukuhamba, futhi ngesizathu esihle. Inkululeko kokuba nihamba nezimpahla zenu emhlane wakho igxuma kusukela isitimela ukuqeqesha futhi kuye ngamazwe kuyinto nakho okuhle ngendlela engakholeki. Njengoba lokhu usuthandwa ngakho, thina…
Ah, ukudla ... ekhazimulayo, Ukudla okumnandi. Kulula kanjalo ukuba sihlale sicabanga lapho abahlala Europe kukunika isizathu kakhulu ke! Imizi engcono zokudla zise-Europe, usithemba singabantwana nabezokudla kanye, ngakho ngeke uma ungumuntu…
Ngamaphrofayela eziningi kangaka okusezingeni eliphezulu, amazwe yawenza afana no-Fulansi, Germany, naseSwitzerland, Akumangalisi-Austria engakaze ukuthola ukunakwa kakhulu! Kulungile, Italy neze wawa ngempela off imephu, kodwa indlela isitimela esuka Austria-Italy uqinisekile iye dengwane. kodwa, lokho mayelana…